फूलका थुँगा ओइलाएर झरे, तीन लाख स्वाहा :: Setopati
सुनिता सिटौला काठमाडौं, जेठ २७
डिसेन्ट वैद्यको फूलखेती।
कोरोना महामारी सुरू भएयता करिब दुई वर्षदेखि निरन्तर घाटा खाँदै आएका डिसेन्ट भन्छन्, 'फाइदा त परै जाओस्, साँवा पनि उठाउन सकेको छैन। कतिञ्जेल यी फूल टिपेर फ्याँक्नुपर्ने हो थाहा छैन। बूढापाकाहरूले न गरिखाऊँ न मरिजाऊँ भनेको सुनेको थिएँ। अहिले आफैं भोग्दैछु।'
'पोहोर वैशाखदेखि दोस्रो बाली बेच्ने योजना थियो, चैतदेखि नै लकडाउन भयो,' उनले भने।
'तिहारलाई लक्ष्य गरेर अलिकति सयपत्री लगाएको थिएँ। त्यही बेला भारतबाट ह्वारह्वार्ती सस्तो फूल आयात भएपछि आफूले पनि सस्तोमा बेच्नुपर्‍यो,' उनले भने, 'करिब २० हजार रूपैयाँ आम्दानी भयो होला। त्यत्रो मेहनेत र त्यत्रो समयको लगानीपछि २० हजार कमाइ हुन्छ भने कसरी टिक्न सकिन्छ?'
'पहिले सिजनमा गुणस्तरीय फूलहरू होलसेल जान्थ्यो, केही फूल छानेर मन्दिरमा पठाइन्थ्यो। लकडाउनमा होलसेल पनि बन्द भयो, मन्दिर पनि,' उनले भने, 'यसपालि त साँवा पनि उठेन। अब यो बिरूवाबाट अर्को उत्पादन लिन सकिँदैन।'
फूल व्यवसाय मौसमी हुन्छ। फुल्ने याममा टिपेर बेच्न पाइएन भने त्यसको कुनै महत्व हुँदैन। एकचोटि ओइलाएर झरेपछि सबै फूल खेर जान्छ, डिसेन्टले भने, 'अरू व्यवसायमा जस्तो लकडाउन खुलेपछि कमाउँला भन्ने सहुलियत हामीलाई हुँदैन। हामीले फूल बेच्ने बिहे, ब्रतबन्ध, होटल-रेस्टुरेन्ट र मन्दिरमा हो। अहिले यी सबै बन्द छन्। महामारी बेला मानिसले शुभकार्य पनि गर्दैनन्। लकडाउन खुले पनि यो वर्ष हामीलाई घाटै भयो।'
'भुइँचालोमा त बरू आफन्त भेटिन्थ्यो, उपहार दिइन्थ्यो, मन्दिरमा चढाइन्थ्यो। अहिले त रोग फैलिएको छ भनेर कोही कसैकोमा जाँदैन, मन्दिर पनि बन्द छ। कसरी बेच्नु, कसले किन्नु?' उनले भने।
'बरू दूध नबिके दही, मोही, पनिर बनाउन मिल्छ। तरकारी नबिके सुकाएर अरू उत्पादन बनाउन मिल्छ। फूल भने टिप्नेबित्तिकै बेच्नैपर्छ। अरू उपाय छैन,' उनले भने।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, जेठ २८, २०७८, १२:००:००